पत्रकारलाई दिएको परिचय पत्र श्रीमती कुट्नलाई हो ? – YesKathmandu.com
पत्रकारलाई दिएको परिचय पत्र श्रीमती कुट्नलाई हो ?
बुधबार ०१, भदौ २०७३
पत्रकार समाज रुपान्तरणको लागि आर्दश पात्र हुनु पर्ने हो । तर सबैको हकमा त्यस्तो कहाँ हुँदो रहेछ र ? समाजले गने चुनेको पत्रकारबाटै पीडित भएकी नारी हुँ म । नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका उपाध्यक्ष हुन राजेन्द्र अधिकारी । उनकै श्रीमती हुँ म । तर उनको अत्याचारको काहनी लेखिसाध्य/भनिसाध्य छैन ।
अघिल्लो वर्षको असोज चार गते उनले मलाई निर्घात कुटे । विना कारण । विना कसुर । एक पटक दुई पटक भए त सहन सकिन्थ्यो ।सधैं उही प्रवृत्ति,सधैंको अचाक्ली कति सहनु ? सहनै नसके पछाडि जि.प्र.का कास्किमा उजुरी दिए ।
उजुरी परेपछि जि.प्र.काले झगडा मिलाउन पहल गर्यो तर उनले आफू संगै बस्न नसक्ने बरु कोठा खोजी दिने र खान बस्ने खर्च ब्योहोर्ने शर्तमा अलग अलग बस्न थाल्यौं । ज्यादतीबाट आजित भएकी म उनीबाट असुरक्षित महसुस गरी माइतीघरको शरण लाग्न् पुगे ।
६ महिनासम्म माइतीमै थिए । गत बैशाख राजेन्द्रका काका र छोरी गएर अनुनय विनय गरे ।
र पूराना गल्ती सच्चिएर अगाडि बढ्ने बताए । घर आए । तर एस्को बानी सुध्रिएन ।उस्को अर्कै विधुवा महिलासँग नाजायज सम्बन्ध छ । रंगेहात धेरै पटक पक्रिए । सहेरै बसेको थिए । सानो कुरामा भनाभन हुँदा उनले गत साउन २४ गते टाउकोमा फलामाको रडले हाने । रगतको धारो बग्यो । अचेत भए । अहिले टाउकोमा पाँच टाँका लगाइएको छ । पुन जिप्रकालाई गुहारे ।
उनलाई प्रहरीले त पक्रियो तर पक्राउ परेको आधा घण्टा नबित्दै रिहा भए । पत्रकारलाई सरकारले प्रेस पास दिन्छ । के यस्तै गद्धारी गर्नका लागि हो ? श्रीमती कुट्ने र पिट्नेलाई पक्रन प्रहरीलाई किन सकेन ? के को प्रभावमा परेको हो प्रहरी ?
अहिले उनको रिहाइ पछाडि स्थानीय महिला समूहले पत्नी माथि हिंसा गर्ने अधिकारीलाई छाडिएको भन्दै उनको घर घेराउ गरेका छन् । अधिकारीको घर पोखरा–७ मासबारमा तनाव भएपछि प्रहरीले सुरक्षा दिनु परेको छ ।
मेरो शरिरमा एक मूठी सास र रगत रहेसम्म न्यायका लागि लडिरहन्छु । यस्ता पत्रकारहरुकै कारण आज पत्रकारिता जगत पनि बदनाम भइरहेको छ । आशा अनि विश्वाश छ पीडामा परेकी मलाई तपाईहरुले साथ र सहयोग दिनुहुनेछ ।
( पीडित गंगासँग गरिएको टेलिफोन संवादमा आधारित )
मधेसी नेताहरुकै पार्टीबाट उड्यो ‘मधेश’गच्छदार र यादवको पनि उही भेष
प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै चार पार्टीका सात मन्त्रीले सपथ लिने (क–कस्ले सपथ लिँदैछन्)
गृहले गरयो ११ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा
कोइराला सरकार किन चुक्यो ?
प्रधानमन्त्रीले सोधे : म कति मन्त्रालय र निकायको प्रमुख हुँ ?
भरपाई विना १० खर्च गर्ने सचिवको भागाभाग
श्रृष्टी खड्का बनिन् पहिलो महिला गुल्मपति